Maxamed Faarax Caydiid - Wikipedia
Maxamed Faarax Caydiid (carab:محمد فرح عيديد) (b.15 Diseembar 1934 – 29 July 1996) Wuxuu dhashay taariikhdu markay aheyd 1934, wuxuuna ku dhashay Magaalada Beledweyne- ee Gobolka Hiiraan. Wuxuuna ifka uga tagay 14 caruur ah.
(1934-12-15)15 Diseembar 1934
29. Luuliyo 1996(1996-07-29) (da'da 61jir)
M. V. Frunze Akadeemiyada Milatariga
2 Dhanka Ciidamada iyo Xilalkii uu soo qabtay
3 Dhaq dhaqaaqyadiisii siyaasadeed
4 Buugaagtii uu qoray
5 Luqadaha uu ku hadli jiray
1946–1949:Dugsiga Hoose,dhexe: Mogadishu Somalia
Dhanka Ciidamada iyo Xilalkii uu soo qabtayEdit
1990:Wuxuu iska casilay Xilkii Safiirnimada. 1991 wuxuu Hoggaaminayay Ururkii USC ee La dagaalamay dowladii Kaligii Taliskii Maxamed Siyaad Barre isagoo gacan weyn ku lahaa inuu dalka Ka cararo ka dib 21 sano uu Xukunka Hayay
Dhaq dhaqaaqyadiisii siyaasadeedEdit
1989–1991: nasiib daro waxa uu hogaaminayay tuugadii dalkan qaribtay geeysay meel uu ka soo kaban karin cidii u horseeday dalkan burburkisii cadaabka allaha ku fogeyee ahaa ee U.S.C waxuuna ka xoreeay dadka Soomaaliyeed dhiig ya cabkii Siyaad Bare. 1992:Wuxuu dhisay Isbahaysi la magac baxay Somali Liberation Army, (SLA)oo ay ku bahoobeen Garabyada hubeysan ee ururrada kala ah sida: USC, SPM, SSNM, SDM, SAMO iyo SNU laguna dhisay Baardheere.
1992–1994:Wuxuu hoggaaminayay iska caabinta shacabka Soomaaliyeed ee ka soo horjeeday Siyaasaddii guracaneyd ee US-UNISOM ee ugu dambeyntii laga guuleystay dalkana laga
Buugaagtii uu qorayEdit
Iyo maqaallo kale ee badan oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya iyo Xiriirka ay la leedahay Dowladaha deriska ah iyo adduunweynaha. waxa kale oo ay wada shaqaynjireen hassan dalmar nour
Luqadaha uu ku hadli jirayEdit
dadka uu la soo shaqeeyay waxaa ka mid ah maxamed xasan qaandiid
(Waxaa xusid mudan in uu Caydiid hankiisii siyaasadeed darteed faraha la galay dagaalladii sokeeye, isla markaana uu qayb wayn ka qaatay dagaalladii u dhexeeyey 1990kii illaa 1996kii) Nin dalkan qaribayna uu noqday
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Maxamed_Faarax_Caydiid&oldid=212504"
Last edited on 14 Juun 2021, at 18:29
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Juun 2021, marka ee eheed 18:29.